IPixel 3a kunye nePixel 3a XL: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba nge-7 kaMeyiNgomhla wokuqala weGoogle I / O 2019, siza kudibana neefowuni zikaGoogle ezintsha. Usuku lufikile kunye nolutsha IPixel 3a kunye nePixel 3a XL sele zinikezelwe ngokusemthethweni. Sifumana izixhobo apho uphawu lwenza ukungena kwalo kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Nangona ziimodeli ezimbini esele sazi okuninzi ngazo, kuba kubekho ukuvuza okuninzi.
Kodwa, umdla kwezi fowuni zimbini zorhwebo lwaseMelika ubuninzi. Kuba ibonisa ukungena kwenkampani kolu luhlu luphakathi, ngenxa ye- ukuthengisa kakubi ukuphela kwayo okuphezulu. IPixel 3a kunye nePixel 3a XL gcina izinto zezinye izizukulwana zePixel, kodwa ziyaqhelaniswa neli candelo lentengiso.
Uyilo lweefowuni alubonakalisi uninzi lwezimanga. Kwelinye icala, kuba Besele sibonile ukuba iyakuba yintoni uyilo lwezi fowuni zintsha. Kwelinye icala, kuba zijongeka njengezizukulwana zangaphambili zeefowuni zorhwebo. Ke akukho zinto zininzi kakhulu zothusayo malunga noku. Apho kukho umdla kwinkcazo yazo.
1 Ukucaciswa kwePixel 3a kunye nePixel 3a XL
Ukucaciswa kwePixel 3a kunye nePixel 3a XL
Kwinqanaba lobugcisa akukho mahluko phakathi kwePixel 3a kunye nePixel 3a XL. Umahluko kuphela, ngaphandle kobukhulu bescreen, bubungakanani bebhetri. Ke ngoko, okunye ukuvuza bekungalunganga, kuba basishiye ngeemodeli ezimbini ezahlukeneyo, ebezingakhange zibenjalo. Ithuba elilahlekileyo kuGoogle. Oku kukucaciswa kwayo:
IPHAYELELE YOLAWULO 3A
IPHEPHA ELIKHULULEKILEYO 3G XL
ISIKHUMBUZO I-5,6-intshi gOLED ngesisombululo se-FullHD + (i-2.220 x 1.080 pixels) kunye ne-18,5: 9 umlinganiso wesikrini I-6-intshi gOLED ngesisombululo se-FullHD + (i-2.160 x 1.080 pixels) kunye ne-18: 9 umlinganiso wesikrini
INKQUBO I-Snapdragon 670 ene-Adreno 615 GPU I-Snapdragon 670 ene-Adreno 615 GPU
IKHAMERA EMVA I-Sony IMX363 12,2 MP nge-f / 1.8 kunye ne-OIS + EIS I-Sony IMX363 12,2 MP nge-f / 1.8 kunye ne-OIS + EIS
IKHAMERA ENGAPHAMBILI MP engama-8 ene-f / 2.0 ukuvula MP engama-8 ene-f / 2.0 ukuvula
IBATTERI 3.000 mAh ene-18W yokuTyala ngokukhawuleza 3.700 mAh ene-18W yokuTyala ngokukhawuleza
INKQUBO YOKWENZA I-Android 9 Pie I-Android 9 Pie
UQHAGAMSHELWANO I-USB-C 2.0, i-nano SIM, i-WiFi ac 2 × 2 MIMO, iBluetooth 5.0, iAptx HD, i-NFC, uGoogle Cast, iGPS, i-GLONASS I-USB-C 2.0, i-nano SIM, i-WiFi ac 2 × 2 MIMO, iBluetooth 5.0, iAptx HD, i-NFC, uGoogle Cast, iGPS, i-GLONASS
ABANYE Umfundi ongasemva weminwe, i-3.5mm jack, iEgege esebenzayo Umfundi ongasemva weminwe, i-Edge esebenzayo, i-3.5mm jack
Ubungakanani kunye nobunzima X x 151,3 70,1 8,2 mm
I-147 gram X x 160,1 76,1 8,2 mm
Xabiso 399 euro 479 euro
Iikhamera ziphinde zayindawo eyomeleleyo kuzo zombini iifowuni, njengesiqhelo kwiifowuni zikaGoogle. Basebenzisa inzwa enye, nangona isoftware ikhoyo, usetyenziso lwekhamera, yeyona ilungileyo ikhoyo kwi-Android. Ukuphumla, baneenkcukacha esizifumana rhoqo kuluhlu oluphakathi kwi-Android namhlanje. Ibhetri ngokungathandabuzekiyo ibhetele kwimodeli ye-XL, ethembisa ukuzimela okuhle.
IGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL zikhutshwe ngohlobo olunye kwimeko zombini, 4/64 GB. Nangona siza kuba nethuba lokukhetha phakathi kwemibala eliqela kule meko. Kuba bazisiwe ngombala omhlophe, omnyama kunye ne-lilac ibizwa ngokuba yi-Purple-ish. Ke umntu ngamnye uya kuba nakho ukukhetha ukhetho abaluthanda kakhulu.
Malunga namaxabiso, I-Pixel 3a ifika ngexabiso lama-euro angama-399. Ngelixa imodeli yeXL ihlala kwi-479 euro. Iimodeli ezimbini ezinamaxabiso athile ukuba sithathela ingqalelo udidi lwangoku oluphakathi kwi-Android, apho sihlala sibona amaxabiso ee-200 zeerandi. Ke uhambo lwakho lusenokungabi lula.
Kwabo banomdla, akukho ukulinda ukuthenga esi sizukulwana seefowuni zenkampani. Kuba sele singazithenga ngokusemthethweni kwifayile ye- ivenkile kaGoogle. Ke, ukuba uyayithanda nayiphi na kwezi modeli, ungayithenga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Google Pixel 3a kunye nePixel 3a XL: Ukungena kukaGoogle kuluhlu oluphakathi
Isikhangeli seKiwi sisusiwe kwiVenkile yokuDlala ngokudlala iYouTube ngasemva